Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Vanachiremba Vanovhiya VeCHOP Vanoparadzanisa Mapatya Akabatana Ava Kumba
Mushure merinenge gore mukuchengetwa kwakanyanya paChipatara cheVana chePhiladelphia (CHOP), mapatya ane mwedzi gumi Addison (Addy) naLilianna (Lily) Altobelli vakaparadzaniswa zvakabudirira nevavhiyi veCHOP musi wa10 Gumiguru, 13. Iye zvino kumusha kuChicago, vasikana vakazvarwa vakabatana padumbu nepachipfuva, chirwere chinozivikanwa se thoraco-omphalopagus mapatya, zvichireva kuti vakagovana chiropa, diaphragm, chifuva uye madziro emimba.
Boka rekuvhiya raisanganisira vanamazvikokota vanopfuura gumi nevaviri, kubatanidza vanachiremba vanovhiyawo zvavo, vanotindivadza, veradiologist, chiremba anovhiya mwoyo, uye vanachiremba vanovhiya mapurasitiki, vakapedza anenge maawa gumi vachiparadzanisa vasikana vacho. Mapatya acho paakangoparadzaniswa, boka rokuvhiya rakakamura kuita maviri ndokuvakazve chipfuva nemadziro edumbu zvomusikana mumwe nomumwe, richishandisa mambure uye nzira dzokuvhiya purasitiki kuti mucheche mumwe nomumwe agadzikane.
"Kuparadzanisa mapatya akabatana nguva dzose kunonetsa nokuti rimwe nerimwe boka remapatya rakasiyana, uye vose vane matambudziko akasiyana-siyana uye maonero eanatomic," akadaro chiremba anovhiya anonzi Holly L. Hedrick, MD, chiremba anovhiya vana uye fetus muChikamu chePediatric General. , Kuvhiyiwa kweThoracic uye Fetal paChipatara chevana chePhiladelphia. "Mashandiro anoita chikwata chedu pamwe chete, anoshamisa uye akakosha, nevanhu vazhinji vachiuya kuzoshandira chinangwa chimwe. Addy naLily vari kuita zvakanaka, uye tariro yedu ndeyokuti vave noupenyu hwakazara hunofadza.”
Kubva Kuongororwa kusvika Kuendeswa
Rwendo rwaAddy naLily rwakatanga pavakaonekwa kuti vaive vasati vazvarwa panguva yavo yemavhiki makumi maviri ekuongororwa kweultrasound. Pamberi pekugadzwa ikoko, vabereki Maggie naDom Altobelli vakafungidzira kuti vaive nemwana mumwe, asi mufananidzo weultrasound wakaratidza kuti kwete chete Maggie aive akatakura mafetus maviri asi aive akabatanidzwa padumbu.
Mapatya akabatana haawanzoitiki, anoitika munenge mumwechete mu1 vanozvarwa. Vaviri ava vakaendeswa kuCHOP kuti vanoongororwazve, sezvo chipatara chiri chimwe chevashoma munyika vane ruzivo rwekuparadzanisa mapatya akabatana. Vanopfuura 50,000 mapatya akabatana akapatsanurwa kuCHOP kubvira 28, zvakanyanya pane chero chipatara munyika.
Vaviri ava vakasangana nanamazvikokota veCHIP's Richard D. Wood Jr. Center for Fetal Diagnosis and Treatment, uko Maggie akaongororwa zvakadzama prenatal kuti aone kana zvaikwanisika kupatsanura mapatya, zvichienderana nekubatana kwavo uye kugovana chimiro chemuviri. Vanachiremba vakaona kuti kunyange zvazvo vasikana vacho vakanga vaine chipfuva nemadziro edumbu, diaphragm, uye chiropa, mapatya acho aiva nemwoyo yakaparadzana, ine utano. Chiropa chavo chakagovaniswa chaive chakakurawo zvekuganhura pakati pavo, zvichivaita vakanaka pakuvhiya kwekuparadzana.
Mushure memwedzi yekuronga kuunza njodzi huru kuburikidza neC-chikamu, inotungamirwa naJulie S. Moldenhauer, MD, Director weObstetrical Services, Addy naLily vakazvarwa munaNovember 18, 2020 muGarbose Family Special Delivery Unit (SDU), CHOP's inpatient delivery unit. Vakapedza mwedzi mina vari muChipatara Chitsva/Mucheche Intensive Care Unit (N/IICU), ichiteverwa nemwedzi mitanhatu muPediatric Intensive Care Unit (PICU). CHOP chiremba anovhiya epurasitiki David W. Low, MD, akaisa michina yeganda kuti atambanudze ganda revasikana mukugadzirira kuvhiyiwa kwekuparadzana. Kufanana nemabharunu madiki, anokororeka, vawedzeredzi veganda vanokura zvishoma nezvishoma kuburikidza nemajekiseni, vachitwasanudza ganda zvishoma nezvishoma nekufamba kwenguva kuitira kuti musikana mumwe nomumwe ave neganda rakakwana rokufukidza madziro ake echipfuva akafumuka uye dumbu pashure pokuparadzana.
Pane imwe nguva mapatya akagadzikana uye pakanga pane ganda rakakwana rekuvhara zvakakwana mushure mekuparadzaniswa, vakange vakagadzirira kuvhiyiwa. Kwasara mwedzi kuvhiyiwa kusati kwaitwa, boka rokuvhiya raisangana vhiki yoga yoga, richiongororazve mapikicha e<em>ultrasound kuti riongorore kugoverwa kweropa pazviropa zvevasikana, kuti vagokwanisa kuona mafambiro eropa uye paiyambuka tsinga dzevasikana. CHOP radiologists yakagadzira 3D modhi, iyo yakaiswa pamwechete sezvimedu zveLego®, kuitira kuti timu yekuvhiya inzwisise hukama hwevasikana vakagovana anatomy uye kudzidzira kuvhiya mukufamba-kuburikidza maekisesaizi, semapfekero ekudzidzira kwezuva rekuvhiyiwa.
Musi wa13 Gumiguru, 2021, mushure memwedzi yekugadzirira, Addy naLily vakavhiyiwa kwemaawa gumi uye vakaparadzaniswa zviri pamutemo na10:2 pm Radiology yakanga iripo panguva yekuvhiyiwa kuti vaone zvakakosha zvimiro zvechiropa neultrasound. Vasikana vacho pavakangoparadzaniswa, boka rokuvhiya rakakamura kuita maviri rikatanga kushanda richidzikamisa musikana mumwe nomumwe nokuvakazve chipfuva chake nemadziro edumbu. Stephanie Fuller, MD, chiremba anovhiya mwoyo, akabatanidza vasikana patent ductus arteriosus uye akave nechokwadi chekuti moyo yevasikana vese yaive munzvimbo kwayo uye ichishanda zvakanaka. Vanachiremba vepurasitiki vakaisa zvidimbu zviviri zvemambure - imwe yenguva pfupi, imwe yekusingaperi - pamusoro pemapatya edumbu nemadziro echipfuva uye ndokuvhara iyo neganda rakanga rakatambanudzwa kwemwedzi apo vasikana vaive muPICU.
Apo vasikana vakanga vabuda muoparesheni, Maggie naDom vakaona vanasikana vavo vakaparadzana kekutanga.
“Kuvaona vaine miviri yavo – miviri yavo yainge yakangonaka – zvaishamisa,” akadaro Maggie. "Zvaingove zvisingatsananguriki."
Musi waZvita 1, 2021, maAltobellis akazobhururuka achienda kumba kuChicago - mapatya mumwe panguva, aine mubereki mumwe - mushure mekugara muPhiladelphia kwerinopfuura gore. Mapatya ava vakapedza mavhiki maviri vari kuchipatara cheLurie Children’s vachichengetwa neboka revarapi iro richavatsigira pedyo nekumba kwavo. Vasikana vakaburitswa panguva yeKisimusi ndokusvika kumba kwavo vakawana chivanze chavo chakashongedzwa nevavakidzani vavo. Holiday vakapedza vari vese pamba semhuri vana.
Addy naLily vese vachine tracheostomy machubhu uye maventilator ekubatsira nekufema kwavo, sezvo vachizoda nguva yekuvandudza tsandanyama uye kugadzirisa kufema vega. Nokufamba kwenguva, vanozorumurwa pamagetsi.
“Tiri kutanga bhuku idzva – harisati ratove chitsauko chitsva, ibhuku idzva,” akadaro Dom. "Takatanga bhuku idzva revasikana, uye kune bhuku reAddy, uye kune bhuku raLily."
Chicago kisimusi mhuri chipatara Philadelphia